Local News – Page2– GuGuGarGar
ပိဋိ ကတ် သုံး ပုံ စလုံး ကို အာဂုံဆောင်နိုင် သည့် သာသနာ့ အာဇာနည် အရှင်မြတ် တစ်ပါး ထပ်မံေ ပ်ါထွန်း လာကြောင်း ( ဇူလိုင် ၂၀ ရက် )ကျင်းပ ခဲ့သည့် (၇၂)ကြိမ်မြောက်၊ တိပိဋ ကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ ချီးကျူးပူဇော်ပွဲနှင့် အောင်လက်မှတ် ဆက်ကပ်လှူ
Shwe | July 20, 2020
Covid-19 ကြောင့် အမရ ပူရမြို့နယ်တွင် လုပ်ဆောင်ေ နသော ရွှေခဲရေဆိုး စွန့်ထုတ် စက်ရုံစီမံကိန်း နှောင့်နှေးကြန့်ြ ကာနေချိန်တွင် မြစ်ရေကတက် လာရာက တာရိုးကျိုးပေါက်မြှု ဖစ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ “အမရပူရ မြို့နယ်ေ ရွှခဲရေဆိုးစွန့် ထုတ်စက်ရုံ စီမံကိန်းကို ခန့်မှန်းခြေ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ေ လာက်က စတင် နေတာ ဖြစ်တယ်၊
ဓမ္မဒူတ ဘုန်းဘုန်း အရှင်ဆေကိန္ဒ ဟာ အမရပူရမြို့ ရေဆိုးထုတ်မြောင်း ကျိုးပေါက် တဲ့ သတင်းတွေ ကို မနက် ၂ နာရီ ၃၀ အချိန်ထိ နားထောင် အပြီး၊ ဇူလိုင်(၂၀)ရက် မနက် ၄ နာရီအချိန် မှာတော့ မန္တလေးမြို့ကို ကြွရောက်လာခဲ့ ပါတယ် ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေ
မန္တလေး အမရပူရ မြို့နယ် ၊ တာရိုး ကျိုးပေါက်မှု ယနေ့ နံနက် လက်ရှိအခြေအနေ ( စိုးရိမ် အဆင့် ကို ရောက်ရှိနေပါပြီ .. ( အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖော်ပြထားပါသည် ) မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်း – မန္တလေး ကန်ပတ်လမ်း၊ ဒေါ်အေးကြင်ထမင်းဆိုင်မြောက်ဘက် ရေဆိုးထုတ်မြောင်း​နေရာ
မန္တလေး အမရ ပူရ ဧရာဝတီမြစ် တာရိုး ကျိုးပေါက်မှု နောက်ဆုံးရ သတင်း ( LIVE )
Shwe | July 19, 2020
အ မ ရ ပူ ရမြို့ နယ် မန္တလေး-စ စ်ကိုင်းကား လမ်းဘေး ရှိ ရွှေခဲရေ ထိန်းတံတားကျိုး ပေါက်မှုဖြစ်ပွား (ဘုန်းဘုန်းကြီး အရှင်ဆေကိန္ဒလည်း ကြွရောက်လာ ) မန္တလေး ခရိုင် ၊ အမရပူရမြို့နယ် မန္တလေး-စစ်ကိုင်း ကား လမ်းဘေး ရှိ ရွှေခဲရေ ထိန်းတံတား ဇူလိုင်
အမ ရပူရ မြို့နယ် မန္တလေး-စစ်ကိုင်း ကားလမ်းဘေးရှိ ရွှေခဲရေထိန်းတံခါးကျိုးပေါ က်မှုဖြစ်ပွား(ရုပ်သံ)
မန္တလေးမြို့ ၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီမြစ်တာရိုး စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ ဒေါ်အေးကြင် ထမင်းဆိုင်အနီး ရေဆိုးထုတ်မြောင်း ကျိုးပေါက်၍ ဧရာဝတီမြစ်ရေများ ဝင်ရောက်နေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ မှ သတင်းထုတ်ပြ န်ပါတယ် ။ “မြစ်ရေတက်လာ တဲ့ အချိန် ရေကန်တော့တွေ ထိုးရင်း လိုက်ပိတ်တာ မနိုင်တော့ ဘဲ ထူးပေါက်တာ ။ နာရီဝက်လောက်တော့
ဖားအောက် ရိပ်သာ တွင် ဘယ်လဂျီယမ် နိုင်ငံသား ( ၄၄ )ဦး ကိုရီးယား( ၃) ဦး တောင် အာဖရိက(၄)ဦး လာရောက် ရဟန်းခံတာတဲ့ဗျာ. ဘယ်လဂျီယမ်နိုင်ငံသား ( ၄၄ )ဦး ကိုရီးယား( ၃) ဦး တောင်အာဖရိက(၄)ဦး ဒီကနေ့လာရောက် ရဟန်း ခံတာတဲ့ ဗျာ. ဘယ်လဂျီယမ်နိုင်ငံသား
ပြည်မြို့၊ ဇွန်လ ၁၂၊ ၂၀၂၀။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အတွက် ပထမတန်းမှ နဝမတန်း အထိ စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများကို ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၆ နာရီမှ စတင်ကာ သက်ဆိုင်ရာကျောင်းများ ရှိ ကြော်ငြာသင်ပုန်းများတွင် သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း ပြည်မြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံးမှ သိရသည်။ Source;မြေလတ်အသံ
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ အင်းလေးဒေ သတွင် ဖြစ်ပွားနေသော ၀က်အကောင် ၅၀၀ ခန့်သေဆုံး ခဲ့မှုကို စစ်ဆေးရာ ၀က်အားနည်းရောဂါ အပြင် အာဖရိက ၀က်အပြင်းဖျားေ ရာဂါဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုချ က်ရရှိသဖြင့် ၀က်နှင့်ဝက်ထွ က်ပစ္စည်း တင်သွင်း၊ သယ်ဆောင်၊ ရောင်းချခြင်းကို (၃)လကြာပိတ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၀က်သေဆုံးမှု များအတွက် ရွာပေါင်း(၁၇)ရွာကို စောင့်ကြ
၁။ (၁၁-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၆၅၂)ခု၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၉၃) ခု၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး) (PHL – MDY) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၅၈) ခု